जनता बैंककाे खुद नाफासहित प्रतिसेयर आम्दानीमा वृद्धि ! « Nepal Bahas
जनता बैंककाे खुद नाफासहित प्रतिसेयर आम्दानीमा वृद्धि !
प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०७६, सोमबार ११:४८
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा जनता बैंक नेपालले आकर्षक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
यस अवधिमा बैंकको खुद नाफासहित प्रतिसेयर आम्दानी तथा अन्य सूचकमा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ । चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंक अर्बपतिको सूचीमा उक्लिन सफल भएको छ ।
जनताले यस अवधिमा १ अर्ब २ करोड ३७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा नाफा ६०.५६५ ले बढी हो । गत वर्ष यस अवधिमा ६३ करोड ७५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मात्र खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । यस अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा ६१ करोड ७३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
जनताको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा पनि आर्कषक वृद्धि भएकाले खुद नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो । खुद ब्याज आम्दानी गत वर्षको तुलनामा ४६.६३५ ले बढेर २ अर्ब ४५ करोड ९ लाख ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष १ अर्ब ६७ करोड १६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।
यता, बैंकले सञ्चालन नाफा ५६.२८५ ले बढेर १ अर्ब ४७ करोड २८ लाख २९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा बैंकले ९४ करोड २३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको थियो ।
चैत मसान्तसम्म जनता बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले जगेडा कोषमा १ अर्ब ७५ करोड २७ लाख रुपैयाँ राखेको छ । रिजर्भमा गत वर्ष १ अर्ब ३४ करोड ८७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । त्यस्तै, रिटेन्ड् अर्निङमा ६२ करोड ३३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ राखेको छ ।
यस अवधिमा बैंकले सेवाग्राहीबाट ७० अर्ब ४४ करोड ९७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ६४ अर्ब ७० करोड १० लाख ८७ हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । बैंकले गत वर्ष १.९५५ रहेको खराब कर्जा घटाएर अहिले १.२१५ मा सीमित गरेको छ । यस अवधिमा बैंकको आधारदर ११.६६५ रहेको छ ।
यता, जनताको प्रतिसेयर आम्दानीमा पनि आकर्षक सुधार भएको छ । प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६ रुपैयाँ ४३ पैसाले बढेर १७ रुपैयाँ ६ पैसा पुगेको छ । गत वर्ष प्रतिसेयर आम्दानी १० रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको थियो । यसको प्रतिसेयर नेटवर्थ १२९ रुपैयाँ ७ पैसा रहेको छ ।
डेढ दर्जन वाणिज्य बैंकको शेयरमूल्य उच्च दरले वृद्धि
सानिमा बैंकले गर्यो लाभांश प्रस्ताव